I-Axon 10 Pro 5G evela kwi-ZTE iya kuthengiswa ukusuka ngoMeyi 1 | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-ZTE's Axon 10 Pro 5G iyaqhubeka ukuthengiswa ukuqala ngoMeyi 1
Ngexesha leNkomfa yeHlabathi yeSelfowuni (i-MWC) yowama-2019, umboniso wetekhnoloji owenzeka e-Barcelona, ​​eSpain, ngoFebruwari, i-ZTE yazisa I-Axon 10 Pro, eza ecaleni kweAxon 10 Pro 5G.
Ukulandela ukuboniswa kwesi sixhobo, umenzi waseTshayina akakaqinisekisi umhla wokumiselwa kwemodeli esemgangathweni yase China. Ngokubhekisele kupapasho lwe5G lweselfowuni, inkampani iqinisekisile ukuba intengiso yayo izakuqala emva kuka-Meyi 1 phaya, nangona ixabiso layo lingavezwanga. Emva koku, iya kuthengiswa kwamanye amazwe.
I-ZTE Axon 10 Pro 5G: yonke into ekufuneka uyazi malunga neselfowuni
Nangona sele sichaze yonke into malunga nayo ngaphambili, nalu uphononongo olutsha malunga nesona sixhobo siphambili seZTE esisinika sona, esiza nenkxaso yenethiwekhi ye5G ngenxa Snapdragon 855 exhuma kunye nemodem yeX50 5G, chipset ekunika ukuhambelana nale teknoloji yokunxibelelana. Ngokwenkampani, i-smartphone inokufikelela kwisantya esiphezulu sokukhuphela se-2GB / s kwi-5G.
I-Axon 10 Pro 5G iyakwazi i-6GB ye-RAM kwaye inendawo yokugcina yangaphakathi ye-128GB. Emva koko, iza nefayile ye- I-4,000 mAh ibhetri Ixhasa ukutshaja okukhawulezayo kwe-18W kunye nenkxaso yokutshaja ngaphandle kwamacingo.
Ifowuni inesikrini esikwi-6.47-intshi ye-AMOLED enotshi kuyo. Inika isisombululo se-FullHD + se-2,340 x 1,080 pixels kunye ne-19.5: 9 factor ratio. Yintoni egqithisile, viza ifakwe kwiscreen sokufunda ngeminwe.
Inotshi yangaphambili ye-Axon 10 Pro 5G ilikhaya Ikhamera ye-selfie engama-20. Iglasi ngasemva kwefowuni inenxalenye yekhamera kathathu ebandakanya i-48 MP (f / 1.8) inzwa yokuqala ene-OIS, i-lens ye-20 MP ebanzi, kunye neelensi yefowuni ye-8 ye-OIS.
Ezinye zezinye izinto zefowuni eziqinisekisiweyo ngeteknoloji yevidiyo kukuvula ubuso, imo yendawo ephezulu yasebusuku, isandi se-DTX esinamandla, kunye ne-125-degree degree of view ye-lens-angle angle. Kwelinye icala, I-Android 9 Pie iza ilayishwe kwisixhobo kunye neMiFavor 9.0.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-ZTE's Axon 10 Pro 5G iyaqhubeka ukuthengiswa ukuqala ngoMeyi 1
Isampulu yekhamera yasebusuku ye-Realme 3 Pro ityhila ubuchule bayo bokufota
Umphathi we-Samsung uthi bazakuhlala beziinkokheli kwi-Android